Etu ụlọ ọrụ ejikọrọ ga-esi mepụta $ 47B Identity Security Market | Martech Zone
N'afọ gara aga, nkezi data mebiri data na-efu ụlọ ọrụ ngụkọta nke $ 3.5M, nke bụ 15% karịa afọ gara aga. N'ihi ya, CIO na-achọ ụzọ iji chekwaa data ụlọ ọrụ ha na-echekwa ma na-ebelata ọnwụ nke ndị ọrụ. Njirimara Ping na-ewetara eziokwu gbasara njirimara nchekwa ahịa ma na-enye azịza maka otu ụlọ ọrụ ga-esi nwee ike nweta nchekwa echekwara na infographic dị n'okpuru.
Ihe mgbochi data nwere mmetụta na-adịghị mma na mmetụta ndị ahịa banyere ụdị; otu mmịfe nchekwa nwere ike imebi aha ụlọ ọrụ. Igwe ojii, dị ka Next Gen Identity, na-enye ụlọ ọrụ ohere ịme ka ịnweta nchebe na ngwa ọ bụla site na ngwaọrụ ọ bụla, ebe ọ bụla. N'ihi ịdị irè ya, a na-atụ anya na nchekwa nchekwa nke Gen Gen ọzọ ga-arị elu 7X na 2014. E buru amụma na ọ ga-eto site na $ 6B ebe ọ dị ugbu a, ruo $ 47B site na 2017. Debe data gị nke ọma yana ndị ahịa gị nwere obi ụtọ na igwe ojii igwe ojii agbasaghị, kama firewall.
Tags: azụmahịaigwe-ojiojii ojiinjikọ jikọtara ọnụnchịkọta datainfographic